Tag: rajo | Martech Zone
Waa maxay sababta HubSpot ee Bilaashka ah ee CRM ay tahay Skyrocketing
Monday, May 13, 2019 Monday, May 13, 2019 Douglas Karr
Maalmaha hore ee ganacsiga, maaraynta macluumaadka ku saabsan xiriiradaada iyo macaamiisha ma ahan wax adag. Si kastaba ha noqotee, markii meheraddaadu kororto oo aad macaamiil badan hesho oo aad shaqaaleysiiso shaqaale badan, macluumaadka ku saabsan xiriirada ayaa ku kala firirsan waraaqaha, buugaagta, qoraalo dheg dheg ah, iyo xusuus xasaasi ah. Kobaca ganacsigu waa mid cajaa’ib leh oo ay la socoto baahida loo qabo in la abaabulo macluumaadkaaga. Halkani waa halka HubSpot CRM uu ka yimaado. HubSpot CRM waxaa laga dhisay dhulka hoostiisa si loogu diyaar garoobo casriga
8 Istaraatijiyadaha Lagu Kordhinayo Iibkaaga Saamaynta Waxtarka
Fiidnimadan, waxaan ku maqnaa baskiil wadashaqeyn iyo udhaxeysa huff iyo puff waxaan ka wada hadalnay howlaheena iibka ee ganacsigeenna. Waxaan labadeenaba gabi ahaanba isku raacnay in anshax la'aanta aan ku dalbanay iibkeena ay xanibtay labadeena shirkadood. Wax soo saarkiisa softiweer wuxuu soo jiitaa warshado gaar ah iyo cabirkiisa, sidaa darteed wuxuu horeyba u ogaa cidda rajadiisa ay tahay. Ganacsigeygu wuu yaryahay, laakiin waxaan aad ujecelnahay arrimo gaar ah
Mawduuc badan, Dhibaatooyin badan: Halganka iibka Rep
Talaado, Juun 17, 2014 Douglas Karr
Wax yar ayaan ka daabacnay aaladaha isku waafajinaya dadaalka iibka iyo suuqgeynta. Fikradayda, wakiilada iibka waxay leeyihiin shaqo aad u dhib badan oo la sameeyo maalmahan. 59% waqtigooda waxay qabtaan howlo aan ka aheyn iibinta sida baaritaanka koontada iyo soo saarista raadad. Macaamiisha iyo ganacsataduna waxay awoodaan inay ku sameeyaan cilmi baaris aan caadi ahayn khadka tooska ah, qiimeynta astaamaha, faa'iidooyinka, alaabada, adeegyada, qiimeynta iyo dib u eegista. In kasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo suuq-geyn ah oo la heli karo, 40% suuq-geynta
Sickle & Woo Rajadaada!
Khamiista, Noofembar 7, 2013 Isniin, November 25, 2013 Douglas Karr
Ganacsiyo badan oo ganacsi (B2B) wareegyada iibku waa kuwo dheer oo dhib badan. Waa isku dheelitirnaan maskaxda lagu haayo iyadoo rajo laga qabo illaa inta go'aanka la gaarayo la gaarayo oo aanad ku dhicin iyaga oo aanad kaxayn. Waxaan daawaday dadka qaarkiis waxay kobciyaan tilmaamaha si aad u fiican, waxaanan ku dhejiyay "Ha Ka Jawaabin" buugayga taleefankayga si aan uga fogaado dadka iibiya ee aan sameynin. Cilmi baaris ayaa sheegtay in aqoonsiga rajadu ay ku kacayso $ 443 halka booqashada midkood ay tahay $ 596. Sababta
Waa Waqtigii aad Dhejin lahayd Wejigaaga Dagaal
Sabtida, Diisambar 20, 2008 Sunday, May 29, 2016 Douglas Karr
Waxaa jira farqi u dhexeeya qofka wax iibiya iyo kan ka dhow. Waxaan aaminsanahay inaan ahay ganacsade weyn, laakiin aad ayaan ugu dhawahay. Waan ogahay inaan iibiyay hawlo badan oo waaweyn, laakiin waligay ma ahayn ninka riixay khad (saxiixa heshiiska). Kuma raaxeysanayo inaan gadaal ka riixo qiyaasta qandaraaska ama inaan cadaadis saaro codsigeyga inaan horey u saxiixo. Nasiib wanaag, waxaan ku hareeraysannahay karti shaqadayda oo aad ujecel fursadahaas. Kuwa noo dhow ayaa awooda